Gịnị Bụ The Top 8 Pizzas Na Italy | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > Gịnị Bụ The Top 8 Pizzas Na Italy
Kedu ebe ka mma iri Pizza karịa obodo chepụtara ya, nri? Ịtali ịhụnanya, n'anya, a n'anya na-atọ ụtọ nri-tụgharịa-nri! Sịkwa pizzas na Italy na- ghọọ a dị ọcha ụdị art, na emesịwo UNESCO nwapụtara!
Agagharị gburugburu Italy, ị ga-ahụ pizzerias meghere na narị afọ nke 18 ma ndị ọhụrụ, na a kpam kpam ọhụrụ na mmiri. E nwere ọtụtụ narị iche isi nhọrọ, toppings, nha, na flavors. Ọwọrọ, i nwere ike ikwu na-enwe Pizza dịkarịa ala otu ugboro n'oge gị nleta a mara mma Mediterranean obodo… dịkwa mma? Good. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị a Pizza ofufe, Italian chefs ga-ị ịgbanwe obi gị
Ndepụta anyị ga-enye gị ụlọ nri kacha mma na Rome, Milan, Florence, Naples, na Verona. Ebe a na-n'elu 8 pizzas na Italy.
IHE: Echefukwala download niile super bara uru njem ngwa ọdịnala tupu ị na-amalite gị njem.
Da Vittorio na Trastevere, Rome: Pizza na adventurous ighikota
Mgbe a na ghota nke Pizzas Na Italy, ị nwere ike akụkụ na nlele nke "Tre Colori Pizza." atọ dị iche iche na-atọkwa ụtọ Efrata-eme ka a red, ọcha, na Pizza akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dị ka Italian ọkọlọtọ. Gbalịa ka ị ghara ka jalapeno-ede ede, oseose Sicilian soseji, na tangy ọcha cheese ọkụ n'ọnụ gị. Ọ bụrụ na ị rụọ dum Pizza na 10 nkeji ma ọ bụ obere i nweta a na-agbata n'ọsọ. Tụkwasị na nke a na-achị, ị nwekwara ike na-aṅụ ihe karịrị 16 ounce nke mmiri ma ọ bụ biya. The eto eto na-akawanye ya nri free, t-uwe elu, na foto e tinyere na mgbidi ama ama. na, ihe na-eme ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eme ka ọ? Ị nwere ike mgbe niile na-agbalị ọzọ, ka na-echeta nke a mgbe ị na- njem ka Rome.
Ụlọ pizza Da Attilio, Naples: Ezi Ụdị Pizza
Ka na-amalite anyị akụkọ banyere pizzas na Italy na ụfọdụ isi. ọtụtụ Ịtali atụle Margherita nanị ezi ụdị Pizza. Dị nnọọ ole na ole ọhụrụ na arụrụ n'ụlọ Efrata kwesịrị ime ka maka a magburu onwe efere, o doro anya na. Na mgbe ọ na-abịa Da Attilio si Margherita, ha nri. arụrụ n'ụlọ mgwakota, ọhụrụ tomato ihendori, olive mmanụ, na ọhụrụ mozzarella bụ ihe niile ị chọrọ. Ọ bụrụ na ọnụ gị na-atọ ka ị na-agụ nke a, Da Attilio bụ unu ebe. Jide n'aka na-lelee ya mgbe ịgagharị obodo nke Naples.
https://www.youtube.com/watch?v = QyWLTQx–na
flavor, Verona: The Art nke Ime DOE
Sapore bụ ebe ị pụrụ ịchọta broadest nso nke elu-edu ọka nanị otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Renato Bosco, na ezoro nke a ghota nke Pizzas Na Italy ebe, a na-ewere otu n'ime Italy ji mma nri Ndinam ọkachamara. Ebe ọ bụ na i nwere ike ịhụ ọtụtụ ụdị dị iche iche nke pizzas ebe a, ọ ga-abụ oké na-arịọ maka a degustation menu. Ọ na-atụ aro ka ha jụọ banyere dị iche iche isi nhọrọ tupu ị na-eme ka a mkpebi ikpeazụ. Vegans na-emekarị n'anya Sapore na-enye ebe ọ bụ na o nwere ihe n'ụba nke pizzas nke dakọtara ha mmasị.
Milan ka Verona Ụgbọ oloko
ụlọ pizza Brandi, Naples: N'etiti Best Pizzas na Italy Ebe ọ bụ na narị afọ nke 18
Ụlọ pizza Brandi bụ kọrọ maka coining okwu Pizza Margherita. Ha mere nke a aha asọpụrụ eze nwaanyị nke otu aha. N'ezie, na Pizza na otu Efrata adị tupu, ma nke a moniker mere ya iconic na Pizza eluigwe na ala. Ụlọ pizza Brandi ụbọchị laghachi 1870 mgbe ọ na-ejikwara n'okpuru aha nke ụlọ pizza di Pietro. Ọdịnala na akụkọ n'azụ ebe a mere ka ọ na-ewu ewu n'etiti ndị Ịtali na njem nleta. Ọ bụ ya mere ìgwè mmadụ ka na-akpọkọta ebe a agụụ na-agụ a iberi nke a queen-aha ya bụ obi ụtọ.
Rimini na Naples Ụgbọ oloko
Siena na Naples Ụgbọ oloko
A bit ọnụ maka a Pizza ebe, ma ya ime na ebe-eme ziri ezi a nnukwu ụgwọ. Otú o sina dị, na Pizza bụ na-atọ ụtọ kwa. Nke a ụlọ pizza bụ maka ndị na-eche na mpụga nke igbe. Imefusị Efrata ga-aka gị na-agbalị ihe ọhụrụ na pụrụ iche, dị ka a Pizza na mkpụrụ fig ma ọ bụ na Erimeri. ọzọ, a degustation menu bụ a oké oke ebe a, ebe ọ dịghị mfe ikpebi ihe bulie. Ọzọkwa, n'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ pizzas na Italy, onye a bụ n'ezie mfe mgbari.
Il Trapizzino, Rome: Ihe Little Dị Iche Iche
Il Trapizzino bụ ezigbo anya maka ihe ọ bụla Pizza n'anya. N'igosi ọdịiche ndị ọzọ pizzas na Italy, pizzas ebe a anya ọzọ dị ka zita sandwiches. Ụfọdụ na-akpọ ha stuffed pizzas. Inside ndị a stuffed triangles i nwere ike ịhụ Efrata ka steamed chicken, eggplant, na red octopus. Mgwakota agwa bụ nnọọ ìhè, nke-enye gị na-eri abụọ ma ọ bụ atọ iberibe. Nke a obere, ebe dị mma na obi nke Testaccio na -ejupụta na ndị mmadụ. N'ihi ya, i mma ka a ndoputa dịkarịa ala awa ole na ole tupu.
Trieste ka Rome Ụgbọ oloko
La Spezia ka Rome Ụgbọ oloko
Pizza AM, Milan: A Ebe You Pụrụ Iri na Cue Pizzas Na Italy
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma-mara Pizzas Na Italy na ọ bụ Milan. N'ihi ya, adịghị anya ma ọ bụrụ na ị na-ahụ a akara nke ndị mmadụ na-eche n'èzí shop. Cues na-a mgbe ihe na Pizza AM. Ebe ọ bụ na ha achọghị ka ị na-aga ebe ọzọ, nwe ga-enye gị obere Pizza Mpekere mgbe ị na-eche. Ị nwere ike nweta a iko Italian ọcha mmanya oke. Ha nwere a obere menu, na na 3 ụdị Pizza. hey, echegbula onwe gị – ha niile na-ebube, otú ị ga-eche dị ka ị na-efu si na niile.
Trieste na Milan Ụgbọ oloko
Perugia na Milan Ụgbọ oloko
Symbiosis Organic Pizza, Florence: A Healthy Were na Pizzas Na Italy
Ọ bụrụ na ị na-achọ a gluten free-Pizzas na Italy, Symbiosis na Organic Florence bụ aha gị kwesịrị icheta. E nwekwara ọtụtụ vegan nhọrọ, ma n'ozuzu, ọ bụla Pizza na-atọ ịtụnanya! Ihe niile na-mere si organic Efrata, na-eme ka a Pizza a bit mma karịa ndị ọzọ. Mgwakota agwa bụ nnọọ oké, nke pụrụ ịdị mgbe onye ọ bụla na-amasị. ma – onye ọ bụla ga-n'anya ọgaranya ndochi nke ịma aka ndị ị na-eri ihe dum Pizza! Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara iri ya niile, abịa ihe na-ekpe na-azọpụta ya maka echi. Ọ ka ga-nụrụ ụtọ na-atọ ụtọ.
N'ihi ya, e na ị nwere ya. Nke a bụ na anyị na-ahọrọ nke n'elu pizzas na Italy. N'ihi ya, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ileta, na ọtụtụ dị iche iche ọdịiche nụrụ ụtọ! Otú ọ dị, ndị a bụ nanị aro. Ị nwere ike n'ezie ịhụ ọtụtụ ọzọ ebe ya na pizzas uto gburugburu Italy onwe gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka ọ bụla ị na-ekpebi otú kasị mma maka njem na Italy, gaa na anyị na www.saveatrain.com. Anyị ga-adị karịa obi ụtọ na-enyere! Mkpọ gị ụgbọ okporo njem tupu njem dị mkpa, na-enye anyị a oku na-aga, ka njem na-amalite!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ(www.saveatrain.com) a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-8-pizzas-italy%3Flang%3Dig/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#italypizza #Pizza #pizzas .Tali travelitaly